Vampire सागा "गोधूलि" आदेश मा पुस्तकहरू
पुस्तक Stefani मेयर जटिल सम्बन्ध साधारण केटी बेला र पिशाच एडवर्ड बारेमा लामो पाठकहरूलाई captivated छ। प्रत्येक टुक्रा bestseller भयो, र ठूलो परिमाणमा संसारभरि को समग्र उपन्यास को एक श्रृंखला बेचे। भ्रमित र मात्रा को अनुक्रम संग गलत हुन प्राप्त कसरी होइन? छैनन् इतिहास संग परिचित गर्नेहरूलाई, पहिलो भाग, भनिन्छ सुरु गर्नुपर्छ "गोधूलि।" क्रममा पुस्तक, हामी यस लेखमा विचार पछि जारी गरेका थिए।
प्रेम र पिशाच: थाह
पहिलो भाग 2005 मा bookshops मा देखियो। लेखकले द्वारा स्वीकार रूपमा, पुस्तक एक किशोर दर्शक को लागि अभिप्रेरित थियो। अर्को कथा मानिन्छ छैन 17 वर्षीया बेला उनको बुबा, जसलाई त्यो शायद आमाबाबुले छोडेर पछि देख्नुहुन्छ जहाँ एउटा सानो शहर, मा आएको। स्थानीय विद्यालय त्यो downright रहस्य blows जो रहस्यमय एडवर्ड, पूरा गर्दछ। तिनीहरू बीच भावुक भावना खडा, तर पहिलो सेतो छाला एक जवान कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ ...
Vampire भिगो THEMED सबै "गोधूलि"। क्रममा लायक पुस्तकहरु "नयाँ चन्द्रमा" यो विषय अझै पनि विकसित छ जसमा को मात्रा पढेर जारी।
को टाढा टाढा, अधिक रोचक
दोस्रो भाग बारेमा विभिन्न के हो? Stefani मेयर पहिचान रूपमा, त्यो उनको साँचो प्रेम समर्पित। उसलाई परिवार गोप्य बुझेर बेला एडवर्ड लागि भावना संग बढ्तै, तर त्यो यो तिर आफ्नो मनोवृत्ति पुनर्विचार गर्न बाध्य छ। तर यो साँचो भावना तोड्न गर्न सक्ने कुरा हो? तैपनि, प्रेम सम्भावित हानि देखि हेरोइन को दुःखकष्टलगायत मा ध्यान छोडेनन्। अझ रोमान्टिक narrative दिन, लेखक समानताहरु को "रोमियो र जूलियट" संग, ध्यान दिएर पाठकहरूलाई उपन्यास मा देख्न सक्नुहुन्छ कि आकर्षित।
"नयाँ चन्द्रमा" को अन्तिम जटिल समाधान को ग्रहण संग सम्बन्धित छ। बेला, सबै कलन परिवार यसलाई समर्थन कस्तो प्रेम एक, नजिक हुन एक पिशाच परिणत गर्न सहमत छ।
क्रममा पुस्तकहरू सूची अर्को भाग, भनिन्छ द्वारा complemented छ "ग्रहण।" यसको रिलिज को समयमा, 2007 मा, पिशाच सागा मा पहिले नै प्रशंसक को एक सेना गठन गरेको छ। तथ्याङ्क भनेअनुसार बिक्री को पहिलो दिनमा "ग्रहण" प्रतिहरू लाखौं बेचे।
बेला उनको माया गर्नुहुन्छ, चोट याकूबले गर्नुभयो कि जागरूकता देखि पीडित। पिशाच र योजना खामोशी Werewolves बीच युद्ध, तर यो बाहिर जान्छ रूपमा, छोटकरीमा यसलाई मा। को अन्त्य यसको मिति नियुक्त जो एक विवाह को मुख्य वर्ण, वरिपरि निर्माण गरिएको छ। आहत याकूबले टाढा, जान ब्वाँसो को कूटवेश मा बाँकी निर्णय ...
असामान्य "मानव-पिशाच" finale
घटना को सम्पूर्ण इतिहासमा प्रमुख अर्को भाग, अक्सर "गोधूलि भनिन्छ जसमा ठाउँ लिन। सागा "। आदेश पुस्तक आवश्यक "डन" भनिन्छ चौथो टुक्रा उल्लेख, सूची जारी गर्न आवश्यक छ। को दोहरी उपचार फिल्म मिलाइएको यस भाग दुई स्वतन्त्र फिलिम मा विभाजित गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई देखि stems।
वर्णन एक साधारण विषय द्वारा एकताबद्ध - एडवर्ड र बेला एक बच्चाको जन्म। यो एक पिशाच र एक मानव को सुविधाहरू जोडती किनभने नै भविष्यमा छोरी, अविश्वसनीय शक्तिशाली छ। यसलाई छोडेर बेला थकित, आमा कति जाँगरको लाग्छ। त्यो चमत्कारपूर्ण ढङ्गमा बाँच्न। Renesmee धेरै चाँडै बढ्छ। संसारमा उनको उपस्थिति गफ धेरै सिर्जना: त्यहाँ घटना संग खुसी छन् जो ती हुन्, तर त्यहाँ पनि थप कलन परिवार घृणा गर्नेछन् गर्नेहरू ...
सँगै बिक्री गयो को पिशाच सागा अन्तिम भाग संग को शीर्षक अन्तर्गत यो श्रृंखला अर्को उत्पादन हो "गोधूलि।" अर्डर मा पुस्तक "मध्यरातमा सूर्य" द्वारा पूरक गर्नुपर्छ, तर आधिकारिक यो काम उपन्यास को श्रृंखला होइन। यसको peculiarity narrative समय छ - प्लट पहिलो भाग संग साथ विकास, तर पाठक देख्नुहुन्छ आँखा मार्फत कार्य बेला र एडवर्ड छ। कुन उद्देश्यका लागि बनाइएको थियो पत्रकार को प्रश्न, मा, Stefani मेयर त्यो नयाँ सम्बन्ध सम्बन्धित खोज आफू र अनुभव, मुख्य पुरुष चरित्र आँखा देखाउन चाहन्थे कि जवाफ दिन्छन्। को प्रशंसक न्याय गर्न - म यो वा व्यवस्थित। यो "मध्यरात्रि सूर्य" र बाँकी बन्द विभाजित कार्यहरू छैन vampire सागा समावेश कि थप्दा लायक छ, त्यही प्रभावशाली परिसंचरण मा छाप्न साथै अन्य भागहरु बाहिर।
हाम्रो मनपर्ने "गोधूलि"
क्रममा पुस्तकहरू हामी जो प्रकाशन वर्ष समावेश निम्न सूची, तिनीहरूलाई सूची:
"नयाँ चन्द्रमा" (2006)।
"मध्यरात सूर्य" (2008)।
बैरी trotter गर्ने हो?
Chatsky किन एकाकीपनको गर्न बर्बाद? "धिक्कार बुद्धि देखि" ए Griboyedov
Zvyagintsev Aleksandr Grigorevich: बिब्लियोग्राफी
को कथा Yershov को मुख्य नायक
बोरिस Drubetskoy: उपन्यास मा घमन्डी सामाजिक पर्वतारोही "युद्ध र शान्ति"
को कलात्मक शैलीमा शरद ऋतु को विवरण: एक निबंध कसरी लेख्न?
Strigino हवाई अड्डा: वर्णन, इतिहास, सेवा र संभावनाहरु
प्रतिमा Arhangela Mihaila अघि के प्रार्थना
बाल सदन आमाको दिन परिदृश्य मा Matinee
विद्यार्थीलाई लागि सही फर्नीचर
स्वचालित ग्रेनेड लन्चर AGS-17
वेब कसरी बनाउने सिक्न, त्यसपछि प्रकृति को रहस्य प्रकट
लड चींटियहरुलाई: लोक तरिका
आफ्नो हातमा एक शानदार दाग गिलास Windows गर्नुहोस्।
पशु पारिस्थितिकीय: आधारभूत, प्रकार, समस्या
कहिल्यै किनभने यो आफ्नो बच्चा जिस्क्याउ!
गर्भनिरोधक औषधिको "regulon": प्रयोगको लागि निर्देशन
समुद्र तट "समुद्र को गार्डन" (Gelendzhik) - विवरण, पर्यटकहरु को समीक्षा